Natiijada Heshiis Ka Soo Baxay Kulankii Dhex Maray Madaxweyneyaasha Maraykanka Iyo Kuuriyada Waqooyi | Baligubadlemedia.com
Natiijada Heshiis Ka Soo Baxay Kulankii Dhex Maray Madaxweyneyaasha Maraykanka Iyo Kuuriyada Waqooyi
June 12, 2018 - Written by admin
Ka Soo Baxay Kulankii Dhex Maray Madaxweyneyaasha Maraykanka Iyo Kuuriyada Waqooyi
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in kulanka uu la qaatay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu ahaa mid wax ku ool ah oo kalsooni geliyay.
Sida ku cad heshiiska ay labada hogaamiye saxiixeen, waxaa ka go’an sidii Nukliyerka looga cidhibtiri lahaa gacanka Kuuriya iyo ka shaqaynta nabadda gobolka.
Madaxweyne Trump wuxuu yidhi “Waxaan filaya in labada dhinac ay ku farxi doonaan natiijada kulanka”
Kulanka ka dib
hoggaamiyeyaasha waxay kala saxiixdeen dokumenti ku baaqayay in labada dal ay billowdaan xidhiidh cusub.
Waxay isku salaameen hoteel loo dalxiis taga oo ku yaalla Jasiiradda Sentosa ee dalka Singapore ka hor inta ay u billaabanin wada hadallada.
Hoggaaamiyaha Kuuriyada Waqooyi wuxuu dhankiisa sheegay inay go’ansadeen in la iska illaawo wixii hore u dhacay, heshiiskaana ”uu adduunka u horseedi doono isbadello waaweyn.”
Dadka falaanqeeya siyaasadda gobolka ayaa ku kala aragti duwan qodobada ugu dambayn ka soo baxay kulanka, qaarkood waxay u arkaan kulan aan wax wayn soo kordhinayn, halka qaar kalena ay rumaysan yihiin in kulanka uu noqon karo dhabbihii nabadda loo qaadi lahaa.
Heshiiska labada dhinac ay kala saxiixdeen ma ahaan mid faahfaahin ka bixiyay sida gacanka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caagan niyukliyeer.
Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan wada hadallo kale oo ku saabsan amniga gobolka.
Sawirka lasoo qaaday ayaa muujinaya labada hoggaamiye oo is salaamaya, waxay astaan u noqonaysaa in labada dal ay xidhiidh wanaagsan yeeshaan kuwaaso muddo 20 sanno ah ay cadowtinnimo ka dhexeysay.
Trump iyo Kim Jung-un waxaa la socday oo kaliya ah markii ay kulmayeen labo qof oo u kala turjumo, waxayna hadleen in ka yar 40 daqiiqo, ka dibna waxaa ku soo biiray wufuud la taliyeyaal ah oo kulankooda qadada qeyb ka ahaa.
Kulanka taariikhiga ah waxa lagu tilmaamay mid dan ugu jira labada dal inkastoo dhowr jeer oo hore uu qark u saarnaa inuu baaqdo.